Football Khabar » मेस्सी र डेम्बेले एकसाथ प्रशिक्षणमा फर्किए : डर्टमुन्डविरुद्ध खेल्ने सम्भावना कति ?
मेस्सी र डेम्बेले एकसाथ प्रशिक्षणमा फर्किए : डर्टमुन्डविरुद्ध खेल्ने सम्भावना कति ?
स्पेनिस बार्सिलोनाका दुईजना प्रमुख खेलाडी कप्तान लिओनल मेस्सी र फ्रेन्च विंगर उसामान डेम्बेले एकसाथ प्रशिक्षणमा फर्किएका छन् । उनीहरू आजबादेखि समूहसँगै प्रशिक्षणमा सामेल भएका हुन् ।
मेस्सी अन्तर्राष्ट्रिय बिदा मनाएर बार्सिलोना फर्किएपछिको पहिलो दिनको प्रशिक्षणमै घाइते भएपछि उनी त्यसयता टोलीबाहिर रहँदै आएका थिए । हालैका दिनमा पनि उनलाई काल्फ इन्जुरी थपिएपछि उनी केही दिन ढिला गरी प्रशक्षणमा फर्किएका हुन् ।
यता, चोटग्रस्त डेम्बेले पनि मेस्सीसँगै आजबाट प्रशिक्षणमा फर्किएका छन् । उनी सिजनको पहिलो खेल अवे मैदानमा एथ्लेटिक बिल्बाओविरुद्ध खेल्नेक्रममा घाइते भएका थिए । च्याम्पियन्स लिगको खेल खेल्न ३ दिन बाँकी छँदा आक्रमण लाइनका २ जना प्रमुख खेलाडी एकसाथ प्रशिक्षणमा फर्किएपछि बार्सिलोनालाई राहत मिल्ने भएको छ । तर, अझै पनि उनीहरूले च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणको पहिलो खेलमा बोरुसिया डर्टमुन्डविरुद्ध खेल्ने सम्भावना भने ज्यादै न्यून छ ।
स्पेनिस मिडियाका अनुसार मेस्सी पूर्ण रूपमा टिमसँगै प्रशिक्षणमा सहभागी भएका छन् भने डेम्बेले भने आंशिक रूपमा मात्रै सहभागी भएका छन् । उनीहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा फिट भइसकेका छैनन् । र, उनीहरूलाई मेडिकल टिमले ‘अल क्लियरेन्स’ दिइसकेको छैन ।
गत राति बार्सिलोनाले आफ्नो घरमा भ्यालेन्सियालाई ५–२ ले हराएपछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले मेस्सी ठीकठाक अवस्थामा नरहेको प्रष्ट पारे । ‘उनी अहिले नै फिट भइसकेका छैनन् । उनी सक्दो चाँडो मैदान फर्किन चाहन्छन् । तर, उनीमाथि हामी जोखिम उठाउँदैनौं,’ भाल्भर्डेले भने ।
उनले मेस्सीले पूर्ण रूपमा फिट अनुभूत गरेपछि मात्रै आफूले टोलीमा राख्ने पनि बताए ‘उनले डर्टमुन्डसँगको खेल खेल्छन् कि खेल्दैनन्, मलाई थाहा छैन,’ भाल्भर्डेले भने, ‘यसको निर्णय अन्तिम समयमा मात्रै हुनसक्छ ।’
यस सिजनको च्याम्पियन्स लिग मंगलबार रातिबाट सुरु हुँदैछ । समूह ‘एफ’मा रहेको बार्सिलोनाले आफ्नो पहिलो खेल अवे मैदानमा जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डसँग खेल्दैछ । बार्सिलोनाले आफ्नो समूहमा डर्टमुन्डसँगै इटालियन इन्टर मिलान र चेक रिपब्लिकको क्लब स्लाभिया प्रहारको सामना गर्नेछ ।
प्रकाशित मिति २९ भाद्र २०७६, आईतवार ११:५६